ANTHURIUM - WAXYAABAHA GAARKA AH EE DARYEELKA GURIGA - DHIRTA GUDAHA
Xayeysiin xiiso leh oo leh midabo dhalaalaya oo aan caadi ahayn, oo u muuqda caag ka fog fog, waxaa lagu magacaabaa anthurium. Ubaxyo adag oo la fiiriyo, oo ay ugu mahad celinayaan qalabkooda, oo loo yaqaan "flamingo ubax."
Xaaladaha sii kordhaya ee sii kordhaya
Si dhirta si ay u farxaan oo kaliya ma leh oo leh caleenta dhalaalaya, laakiin sidoo kale leh ubaxyo qurux badan, waa inaad buuxisaa dhammaan shuruudaha ay beerashada.
Halabuurka ee ciidda for anthurium
Wixii beeritaanka anthurium indoor isticmaali isku dar ah ciidda, taas oo ka kooban humus, carrada caleen, peat iyo ciid. Dhammaan qaybaha waa in ay kudhacaan 2: 1: 1: 0.5.
Si kor loogu qaado biyaha iyo hawada hawada, qiyaastii 15% ka buuxsameyaal badan ayaa lagu daraa ciidda isku dhafka ah: kalluunka, lebbiska lebiska, dhuxusha, iyo dhogorta. Ciidda waa inay ahaato waxoogaa asiidh ah - PH 5.5 ilaa 6.5.
Isku dar ah ciidda waxaa loo diyaarin karaa isku dar ah ciidda ubaxyada iyo substrate for orchids ee loo siman yahay is le'eg. Ku fiicnaantu waa miisaanka.
Maadaama ay Anthurium tahay warshad kuleyl ah, isbeddello xoog leh oo heerkulka ah waa mid aan loo baahnayn. Warshadu waxay dareemaysaa wanaagsan heerkul ah 20-25 ° C. Xilliga jiilaalka, heerkulku waa inuusan ka yarayn 16 ° C.
Anthurium waxay doorbidaan qoyaan badan oo aan u dulqaadan karin, sidaas darteed buufinta ee caleenta waa in si joogto ah loo sameeyaa.
Waa muhiim! Ha ku buufin florescences of anthurium, sida ay u muuqdaan on dhibcood, iyo tani waxay si xun u saameysaa muddada ubax.
Si kor loogu qaado qoyaanka hawada, maqaarka sphagnum waxaa la dhigaa dusha sare ee dheriga. Waxay haysaa qoyaan si fiican waxayna kicisaa koritaanka xididada dhirta. Sidoo kale, si aad u kordho qoyaanka dhirta ku xiga, waxaad xajin kartaa suxuunta biyaha, uumiinka kaas oo keeni doona cimilada daaqadaha windowsill ee ku dhow midka kulaylaha.
Warshadu waxay u egtahay hoos-u-dulqaad, laakiin koritaanka caadiga ah iyo ubax waxaad u baahan tahay iftiin cad oo aan qorraxdu si toos ah lahayn. Inliyada xitaa hadhuudhka ayaa kori doona, laakiin ubaxu - maya.
Joogitaanka iftiinka ayaa saameynaya ubax, in kasta oo dhirta aysan u dulqaadanayn qorraxdu si toos ah. Xilliga jiilaalka, iftiin dheeraad ah ayaa loo isticmaali karaa ubax.
Sidee u daryeeshaa in la barbardhigo anthurium
Haddii aad si fiican u daryeesho anthurium, waxay ku farxi doontaa adigoo leh ubaxyo qurux badan iyo ubax midab leh. Anthurium waxaa loola jeedaa dhirta furfuran.
Waxa laga yaabaa inay caadi ahaan dareemaan windowsill-kaaga, laakiin aanaan ubaxin. Tixgeli waxyaabaha saameeya saameynta ubax la'aanta:
Dheriga weyn. Waxaa laga yaabaa in aad "xajisay" dhirtaada oo u dhex gelisay dher weyn sidaas darteed waxay ahayd mid ballaaran. Si kastaba ha ahaatee, tani waa qalad, sababtoo ah dhirta aad u dhow, si dhakhso ah ayuu u barbareeyaa.
Dheriga weyn, waxaad heli kartaa oo keliya caleenta quruxda badan. Markaad dooranayso dheriga, waa in lagu hagaa xaqiiqda ah in aysan aheyn bilaash, laakiin waa inay noqotaa mid ballaaran.
Beddelaadda sannadlaha ah ee substrate sidoo kale si fiican u saameeyaa ubax ee geedka.
Xaalado aan haboonayn ee xabsiga.
Ku habboon waraabinta ciidda
Warshadku waxay u baahan tahay heerkul ah 18-20 ° C si loo dhigo buruunka ubaxa. Sidaa darteed, haddii anthurium ku yaal meel u dhow batteriga dhexe, ka dibna tani waxay si xun u saameeyaa geedi socodka ubaxa. Qoyaanku waa inuu sarreeyaa, laakiin waa inaad hubisaa in waraabinta xad dhaafka ahi aysan u horseedeynin duufaanka.
Waa lagama maarmaan in la waraabiyo warshad biyo qandac ah 3-4 cisho kasta, xilliga qabowga xilliga qaboobaha waa la dhimayaa hal mar toddobaadkii. Anthurium waxay ka jawaabtaa labadaba biyo waraabin ah iyo ciid qallalan oo leh xaashiyo huruud ah.
Haddii ka dib markii biyaha lagu daro biyaha lakulanka, markaas waa in la nadiifiyaa ka dib nus saac.
Xaaladaha lagama maarmaanka u ah waraabinta saxda ah waa biyo diiran oo aan ku jirin lime, maadaama anthurium doorbiday substrate waxoogaa yar.
In geedi socodka ubax, kaalin muhiim ah ayaa lagu ciyaaro by bacarimiso dhirta leh bacriminta for anthurium ubax. Halkan waxyaabaha ugu muhiimsani ma ahan in ay dhaafto. Si arrintan loo sameeyo, si joogta ah u samee dhar, lakiin feejignaanta xalka ayaa lagu taliyey in tilmaamaha lagu yareeyo.
Waa muhiim! Dharka ugu sarreeya waxaa la sameeyaa wakhtiga diiran laba jeer bishii iyo jiilaalka mar bishiiba.
Si aad si fiican ugu quudiso anthurium at home, waxaa lagama maarmaan ah in la beddelo macdanta iyo Bacriminta organic. Quudinta warshad dhalinyaro ah ayaa la sameyn karaa oo keliya kadib marka la buuxiyo rootingka.
Haddii uu geedka jiran yahay, markaa quudinta waa in la hakiyo. Warshadu waxay u baahan tahay nasasho iyo soo kabasho.
Ma taqaanaa? Waxaa jira siyaabo lagu kicinayo ubax. Si tan loo sameeyo, guga hore biyaha warshad biyo diiran (40-50° C). Tani waxay dhalin doontaa ubax. Laakiin waa in la xusuusnaado in dhirta ay tahay inay ka nastaan ​​ubax iyo waqti ay ku koraan caleenta. Kicinta joogtada ah ee ubax waxay keeni kartaa dhimashadiisa.
Dib u noolaanshaha dhirta
Warshad qadiim ah lumiyo ma aha oo kaliya muuqaal qurxin, laakiin sidoo kale joojiyo bloom.
Haddii anthurium ku siinayso caleemo badan oo caleemo ah ama midab leh caleemo yaryar iyo ubax yaryar, ama uu leeyahay hal rosette oo caleemo ah oo ku yaala jiriga ku daboolaya haraadiga caleemaha hore, ka dibna calaamadahaasi waxay muujinayaan baahida dib u noolow geedka.
Nidaamka dib-u-nooleynta waa mid sahlan. Taniyo anthurium waxay leedahay xididada aalkolada, waxaa lagama maarmaan ah in la gooyo dusha sare ee warshadaha leh xididada 2-3 anteenada oo ku beeri carrada..
Wixii warshad cut a, waraabinta waa in la yareeyo, iyo ka dib muddo yar, rosettes dhinaca caleemaha muuqan doonaa. Marka ay koraan, ubaxa waa la faafin karaa iyada oo loo qaybinayo baadiyaha.
Haddii aad rabto in aad dib u dhisto warshadda, laakiin ma laha astaamaha aalkolada, waa inay marka hore koraan. Si arrintan loo sameeyo, qaybta lafdhabarta ee asliga ah ee meelaha bilowga ah ee xididdada anteenada waxaa lagu duudduubay dhuxul leh sphagnum iyo si joogto ah qoyan. Xididdadu waxay ku faafi doonaan geela si dhakhso ah, tanina waxay u oggolaan doontaa dhalinyarada in ay dhacdo iyada oo aan wax khatar ah ka dhicin dhirta.
Xeerarka amniga ee daryeelka xanaanada sunta ah
Anthurium waxaa loola jeedaa dhirta sunta leh. Sidaa daraadeed, daryeel waa in la geeyaa in carruurta ama xayawaanka gurigooda aysan calalin karin caleemaha iyo miraha geedka. Astaamaha sumowga waxay noqon karaan matag, shuban ama dermatitis maqaarka.
Dib u celinta dhirta, maqaarka gacmuhu waa la ilaalin karaa gacmo-gashi, iyo ka dib markaad daryeesho, ha ilaawin inaad gacmahaaga si fiican ugu dhaqdo saabuun iyo biyo.
Haddii dheecaan ka mid ah dhirta ay taabato maqaarka ama indhaha, waa lagama maarmaan in la dhaqo meelahaas jirka oo biyo badan leh. Haddii qaybo ka mid ah dhirta ay ku jiraan caloosha, waxaa lagama maarmaan ah inay matagaan matag si ay uga saarto oo cabaan nuugayaasha. Haddii ay dhacdo calaamadaha daran ee sumowga, wac ambalansi.
Inkasta oo anthurium uu yahay sun, waxaa iska leh qalajiyayaasha hawada.
Ma taqaanaa? Anthurium wuxuu ilaaliyaa dadka ku dhashay calaamadda Leo. Waxa uu siinayaa jacayl, farxad iyo kicin kara hal-abuurka.
Sidee loo beddelaa anthurium
Warshadda dhalinyarada waa in lagu celiyaa sanad walba, iyo qaangaarka - hal mar 3 sano. Haddii aan la sameynin, caleemaha dhirta waxay noqon doonaan madow, oo ubaxyadu ugu dhakhsaha badan way engegi doonaan.
Qalitaanka Anthurium waa in lagu sameeyaa taxanaha soo socda:
Ka saar ubaxa dherigii hore ee saldhigga cawska iyo ka saar dhulka u dhexeeya xididada. Tan waxaa lagu sameyn karaa ulo alwaax ah, ka dibna ka hooseysa biyo socda.
Haddii ay lagama maarmaan noqoto, ka saar xididada waxyeelo Maraq ku rush diyaari dhuxul firfircoon ama qorfe. Si loo kobciyo koritaanka xididka, waxaad ku rushaysaa xididdada dhirta xalkeeda wax kasta oo kiciya 2 saacadood.
Saar qaboojiyaha hoose ee dheriga. Waxay ka hortagi doontaa leexashada xididada leh waraabin xad dhaaf ah.
Qabashada lakabka yar ee carrada ee bartamaha dheriga, dhig ubaxa. Xakamee xididada oo ku dabool dhulka. Xalka carrada ee kor ku xusan waa in uu ahaado ugu yaraan 2 cm.
Biyaha waraabinta si fiican.
Hababka dhalmada ee anthurium waxay noqon kartaa kuwo badan, laakiin tixgeliyaan kuwa ugu caansan.
Bannaanka u khibrad leh waa habka ugu wanaagsan ee loogu yeero faafinta qaybta anthurium ee dhirta hooyada. Noocida noocan ah waxay ku haboon tahay dhirta qaangaarka weyn. Si arrintan loo sameeyo, u qaad warshadda dheriga iyo mindida fiiqan oo loo qaybiyo qaybo.
Qaybaha waxaa lagu dhalaalayaa budada kijinka ah. Qeyb kastana waa inay leeyihiin xidido iyo dhowr afkoda. Qaybaha kala duwan waxaa lagu beeray dheriyo kala duwan oo ah mugga yar. U faafinta dhirta sidan, waxaad heli kartaa ubax sanadka hadda.
Dheriga ballaaran, qaababka dambe ayaa badanaa la sameeyaa. Waxa kale oo laga yaabaa inay kala tagaan inta lagu guda jiro transplanting. Ha ka jiidin dheriga, tani waxay keenaysaa dhaawac halis ah oo xididdada geedka.
Geedaha dhirta si buuxda u xidhan 15-20 maalmood, laakiin bilowgii hawshan waxaa la arki karaa toddobaadkii. Sida ugu dhakhsaha badan xididada koraan 2-3 cm dheer, waxay ku beeray dhulka ku jira koobabka caag ah.
Dib u dhigida by gooyn ah waxaa lagu fuliyaa si amar ah soo socda:
Kala saar caleenka dhirta leh kor u kaca 5-8 cm dheer;
Geedka dhirta la qalajiyey 5-10 daqiiqadood;
Waxaan ka saarnaa saxanka caleen;
Jidhka waxaa la dhigaa dhoobo qoyan ama peat leh iskugeynta ciidda ee saamiga 1: 1;
Ku darso suxuunta adoo gooynaya caag baco ah iyo meel diiran.
Badanaa faafinta adoo isticmaalaya gooynta xididdada. Nidaamkan uma baahna rooting, haddii dhererka xididdada ay ka badan tahay 3 cm. Haddii dhererka xididada yar yahay, waa lagama maarmaan in la kobciyo kobcintooda adoo ku duubaya xoqan iyo si joogto ah uumi.
Anthurium waa epiphyde, waxay awood u leedahay in ay bixiso xididdada. Awoodgani waxaa si weyn loo isticmaalaa gooynta gooynta, farcankiisa dambe iyo gooynta.
Dooro habka ugu wanaagsan ee taranta oo ha iloobin inaad ku ilaaliso xaaladaha raaxada leh iyo daryeelka joogtada ah ee warshaddaada. Kadibna way ku farxi doontaa ubaxyada quruxda badan.